Faallooyinka dhexdhexaadka ah ee dhexdhexaadka ah? - Geofumadas
Fikradaha Dhexdhexaadinta ah
Abriil, 2008 Internet iyo Blogs
Qof ayaa sheegay in ku dhajinta edbinta ay keeneyso qorista nolosha, oo aan la dhexdhexaadin faallooyinka waxay noqon kartaa dhimashada baloogga. Hagaag, hadaanan xasuusan cida dhahday, waa macquul inaan hada kadhigay 🙂
Iyadoo la adeegsanayo spam, heshiisyada 'Viagra', silsiladaha fayraska, iyo 'troyns' cynicism, waxaa muhiim ah faallooyinka dhexdhexaadka ah. Uguyaraan, waad caawin kartaa kuwa leh ujeedooyin aad uwanaagsan laakiin dhibaatadooda higgaadintu waa mid daba-dheer (waan sameeyaa), ama waad baabiin kartaa kuwa adeegsada luqadda aflagaadada ah ... laakiin waxaan helay hab xiiso leh oo aan dhexdhexaadka uga dhigo faallooyinka:
Wiilasha Fragoneta.com Waxay leeyihiin ujeedo wanaagsan oo ah inay daryeelaan bartaada oo ka kooban tahay mid aad u wanaagsan.
Waxay daabaceen qoraalkan, kaas oo aan aad u jeclahay inkasta oo ay horey u daabaceen Green Sleeves e Inkilino; Hagaag hadda meel kasta wuu marayaa waxaanan u malaynayaa in qof loo dhiibo "habka":
Xusuus Joogtada ah ee Adeegga Farsamada:
Sanadkii la soo dhaafay waxaan ka bedelay nooca aroosadda 'Bride 7.0' oo loo beddelay Xaaska 1.0, waxaanan arkay in barnaamijku bilaabay hannaan hoosaadyo lama filaan ah oo la yiraahdo "Wiil" kaasoo qaatay meelo badan iyo ilo muhiim ah iyo in barnaamijka sidoo kale ku jira disk badan. Laguma xusin ifafaalekan buugyaraha sharaxaadda ee barnaamijka.
Dhanka kale, Xaaska 1.0 ayaa iskaa wax u qabsatay sidii degane ahaan barnaamijyada kale oo dhan waxaana la bilaabay inta lagu gudajiray dalab kale, iyadoo la kormeerayo dhammaan howlaha nidaamka.
Araajida sida Beer oo leh Asxaabta 10.3, Habeenkii Cabitaannada 2.5, iyo Soccer Dominguero 5.0 shaqo dambe kuma jiraan nidaamkuna wuu sudhan yahay markasta oo aan isku dayo inaan xidho.
Mararka qaarkood barnaamij qarsoon (virus?) Waxaa loogu yeeraa soddoh ...
... wuu socdaa laakiin gudaha Green Sleeves wuxuu leeyahay jawaabta
Wax yar baa laga ogyahay cidda qoray qoraagii asalka ahaa, kaas oo jidka agtiisa ku leh hal-abuurnimo aad u wanaagsan oo taariikh looga dhigo luqadda farsamada, mar ayaan ku sameeyay "sheeko jacayl oo loogu talagalay geomatikadaSidii aan u maleeyay inay fiicneyd, waxaan uga tagay faallooyinkaan:
hehehe, miyaanay ahayn in Dual Core uusan lahayn awood ku filan shuruudahaaga?
... waxyar ka dib iyagu waa cawaaqibxumada aad isticmaaleyso kaydka dalwaddii ...
Sida muuqata xiriirka ma aha sidaas muuqata, waa inaan weydiinaa yaa sameeyey qoraalka asalka ah; Iyagoo ka jawaabaya waxay ii soo direen emaylkan:
waxaad ku qortay buuggan bogga fragoneta.com:
...qoraalka la qeexay...
Anaguna ma aragno xiriir la leh boostada, waxaan si taxaddar leh uga taxadaraynaa faallooyinka iyo xiriirinta maxaa yeelay waxaan hadda bilownay boggan waxaanan dooneynaa inaan ka dhigno booska, sidaa darteed waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado xiriirka si loo ansixiyo.
Waxay ila tahay aniga hab "xiiso leh" oo faallooyinka dhexdhexaadka ah, in kastoo inbadan oo ka mid ahi aysan ku raaxeysan doonin inay ka jawaabaan email sidan oo kale ah iyo xitaa inay faallo ka bixiyaan mar kale xitaa haddii ay leeyihiin ujeedo wanaagsan. Laakiin si aad u aragto inaanan ciil qabin, waxaan kugula talinayaa inaad aragto fragoneta.comWaxaan qabaa inay leedahay awood.
Post Previous" Hore Ajendaha aan ku dabooli Karin Baltimore
Post Next AutoCAD dwg blocks - In ka badan 12,000Next »
4 Jawaabayaa "Faallooyin Dhexdhexaad Dhexdhexaad ah?"
InKiLiNo isagu wuxuu leeyahay:
Haa, haa, laakiin eeg taariikhaha, miinadu waxay ahayd 5 bilood ka hor Manuel, jaaaaaaa, ja 😛
PS: Mahadsanid xusuusta 😉
Waa hagaag, caddayn ayaa la aqbalaa.
Waxaan rajeynayaa in booqashooyinka qaar ay sidan ku imaan doonaan. Waadna saxantahay, url-ka la tilmaamay wuxuu ahaa cinwaan cinwaan gaar ah I Ma aanan ogeyn, guud ahaan kii ugu dambeeyay ee la isticmaalay ayaa lagu keydiyay foomka.
Waan saxay, ma ahayn magac domain-subdomain-laakiin boosto gaar ah
Waan fahamsanahay in uu dareemi karo xumaan, inkastoo ayan ahayn ujeedadayada, hadda waxaan arkayaa xidhiidhkiisa, ansixiyay 😛.
Anigu waan idin gelin kara by e-mail laakiin hey, via Pingback ayaa ahayd mid aad u asalka. In 12 sano internetka Waxaan helay wax kasta oo waxaa jira web aad u badan, blog iyo troll kuwa pingbacks is-quudin Waxaan qabaa in mararka qaarkood waxaa wanaagsan in la is waydiiyo. Xaaladdaada, iskuxirku ma aheyn URL, laakiin boostada, sabab kale oo lagu weydiiyo.
Aad baad ugu mahadsantahay boostada, ma aqaan halka uu ka yimid qoraalkan, tifatiraha waa inuu iska indhatiraa ama haddii kale waxaan sugeynaa inaan dhigno "dariiqyada".